မဆိုးဘူးဟုခေါ်သော ပို့စ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » မဆိုးဘူးဟုခေါ်သော ပို့စ်…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 25, 2014 in Ideas & Plans, Know-How, DIY, Opinion - Op-ed, Opinions & Discussion, Think Different | 11 comments
ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်... ဂျန်န၀ါရီနောလစ်...
ဟုတ်ပါတယ်.. စမ်းဖူးတယ်.. စိတ်ကြောင့်လား..တကယ်လားတော့ မသိ.. သက်သာတယ်…
ဒါလဲ ဟုတ်တယ်.. စမ်းဖူးတယ်.. ဖုန်းပြောတာတော့ ဟုတ်ဘူး.. သီချင်းနားထောင်တာ ပိုကျယ်တယ်… စမ်းကြည့်…
ဒါကတော့ စမ်းတယ်.. မအောင်မြင်ဘူး.. ကျွန်တော်ပဲ ဆီးလွယ်လို့လား မသိဘူး.. အခု ခရီးသွားတာတောင် တလမ်းလုံးပေါက်နေလို့.. မိန်းမက ပေါက်ကြီးတောင် ခေါ်တယ်… ဟွင့်….
ဟုတ်လောက်တယ်.. အဲဒါလဲ… မစမ်းဖူးသေးပါ…
ဒါကတော့ သက်သာပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ စန်းစန်းတင့်ပဲ… အဲကွန်းကား တကယ် အဲကွန်းရတဲ့ ကားပေါ်ကနေ ဆင်း… အပြင်မှာ နေပူရင် နှာကစေးပြီ… ခဏခဏစမ်းတယ်.. အဆင်ပြေတယ်…
ဘယ်လိုအိပ်အိပ်ပျော်တယ်.. ဒါတော့ စမ်းဘူး…
ဟုတ်လောက်တယ်.. မစမ်းဖူးပေမဲ့ သိတယ်…
သိဘူး.. မူးပြီး ပြဲတာ.. သိပ်မရှိလို့ … ခိ…
လူရှေ့တော့ မစမ်းနဲ့နော်.. သူငယ်ပြန်တယ် ထင်နေမယ်.. အသုံးတည့်တာတော့ တည့်တယ်…
ရေကူးသင်ဖူးတဲ့သူတွေ သိပါတယ်… အဆင်ပြေပါတယ်…
ဒါတော့ လုံးဝ ဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော်က အဲရောဂါရှိတယ်.. ဒါနဲ့ပဲ ပျောက်နေတာ…
ဒီပို့စ်က တော်တော်များများက တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး.. ရုံးက လူတွေကိုပါ စမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်လို့… ကျွန်တော် စမ်းဖူးတယ်ဆိုတာတွေကို စိတ်ချ လုပ်ကြည့်ပါ..
ခြွင်းချက် မသက်သာတဲ့သူတွေလဲ ရှိနိုင်ပေမဲ့.. ၇၀ ရာနှုန်းတော့ သက်သာမှာ သေချာတယ်…
(၄) ချောင်းဟန့်ခြင်းဟာ ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားစေတာမို့ ဆေးထိုးရာမှာအနှောက်အယှက်/အန်တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
(၉) မှားပါတယ် သွေးကြောက မျက်စေနဲ့တစ်တန်းတည်းလောက်က မျက်လုံးဒေါင့် နှာခေါင်းရိုးပေါ်က သွေးကြောကို ဖိနှိပ်ထားရမှာပါ
၄ ကတော့ နည်းနည်းပဲ ဆိုးလိုက်ရင် ရမလားလို့.. လူတော့ မလှုပ်နဲ့ပေါ့…
၉ ကတော့ ပြန်ရှယ်ထားတာဆိုတော့ ဖြစ်လဲ မဖြစ်ဖူးတော့ မစမ်းဖူးသေးပါ.. ဆရာကြီးဟာ ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်..
တကယ်တော့ ပို့စ်တင်တာဟာ လမ်းမှာ ဘုရားစာရွတ်သလိုပဲ.. အသံထွက်မှားရင် ဘေးက ပြင်ပေးသွားကြတာလေ… ဒီလိုပဲ နောက်ဆုံးမှန်သွားမယ်ထင်တယ်..
ငရုတ်သီးထောင်းတုန်း..မျက်စိထဲ… ငရုပ်သီးဖက် ၀င်ရင်..ခြေမကိုရေလောင်းရတယ်ဆိုတာရော…
လူခန္ဓာကိုယ်က အကြောတွေဟာ ခြေဖ၀ါးနဲ့ခြေချောင်းတွေမှာ စုစည်းနေပါတယ်
ဒါကြောင့်လည်း ခြေဖ၀ါးနှိပ်နယ်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်က အကြောတွေ အညောင်းအညာတွေ ပြေစေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိရဲ့အာရုံခံအကြောဟာ လည်းခြေမနှစ်ဖက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘက်မျက်စိအတွက် ညာဖက်ခြေမတွင် ဖြစ်ပြီး ညာဖက်မျက်စိအတွက် ဘယ်ဘက်ခြေမမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်မျက်စိထဲ ငရုတ်သီးဝင်လို့ပူရင် ညာခြေမကို ရေများများလောင်းအေးပါက သက်သာစေပါတယ်။ မျက်စိထဲဝင်နေတဲ့ ငရုတ်သီးဖတ်ကိုတော့ မျက်စိရေဆေးပြီး အရင်ဖယ်ပေါ့ဗျာ ငရုတ်သီးဖတ် ငရုတ်ရေ မျက်စိထဲရှိနေရင်တော့ ဘယ်သက်မလဲ မဟုတ်ဘူးလား ကိုအလင်းဆက်ရေ။ တကယ်သက်သာပါလိမ့်မယ်။
အကယ်လို့ မိမိက မျက်စိအားနည်းသူဆိုရင် မနက်အိပ်ယာထချိန်တွင် ဒူးခေါင်းကနေပြီး ရေ လေး ငါး ခွက်လောက် လောင်းပြီးမှ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်တာမျိုး ပုံမှန်လုပ်ကြည့်ပါ မျက်စိညောင်းညာခြင်း မှုံဝေခြင်းများ သက်သာပါလိမ့်မယ်ဗျ။
စမ်းဘူးတာ တစ်​ခု​ပြောပြမယ်​။ အိပ်​​နေရင်း ​ယောင်​ပြီး စကား​တွေ​ပြော​နေရင်​. ​သေ​သေချာချာမသိပဲရပ်​သွားရင်​. သူ့​ခြေမကို ကိုင်​ပြီးပြန်​​မေးလို့ရတယ်​။ ၅တန်း​ကျောင်းသူဘ၀တုန်းက စမ်းဘူးတာ အဲ့​နောက်​ဘယ်​​တော့မှ မစမ်း​တော့ဘူး။ ​မောင်​​လေးဘာ​တွေ​ယောင်​မှန်းမသိဘူးလို့ သူ​ယောင်​ပြီးသွား​တော့သူ့​ခြေမကိုကိုင်​ပြီး​မေးတာ တကယ်​ပြန်​​ပြောတယ်​ ဘာ​​တွေမှန်း​သေချာမသိဘူး။ ညနက်​နက်​ကြီးဆို​တော့ ​ကြောက်​ပြီးလွှတ်​ချလိုက်​တာရပ်​သွားတယ်​။ အဲ့​နောက်​လုံးဝမစမ်း​တော့ဘူး။ စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ထဲကဖတ်​ဖူးလို့စမ်းကြည့်​တာ။
မသိဘူးဗျ.. မိန်းမတော့ လုပ်တာ တွေ့တယ်.. သက်သာလား မသက်သာလား မသိ…
ညကမက်နေတဲ့အိပ်မက်ကို.. မနက်အနိုးမှာ.. သတိမရစေချင်ရင်.. နှဖူးကိုအပေါ်ဖက်(ဆံပင်လှန်ဖီးသလို) သပ်ပါ…။
ဘယ်လိုသိသလည်းမမေးနဲ့.. မသိဘူးဗျ..။ လုပ်ကြည့်…။
ဟုတ်ပြီဗျာ.. အကုန်စမ်းကြည့်မယ်.. ဟီး.. ထူးရင် ပြန်ပြောမယ်…
ဟုတ်တယ် ခင်ခရေ.. ဒူးရေလောင်းတာ ရိုးရိုးတောင် မဟုတ်ဘူး.. ဆန်ဆေးရေနဲ့ လောင်း ဒူးနာသက်သာသဗျာ.. ဘိုးတော် ပုံမှန်လုပ်နေကျ… ပြောရင်းနဲ့.. ပို့စ်တခု ထပ်စဉ်းစားမိတယ်.. ဆေးမြီးတိုလေးတွေ တကယ် လက်တွေ့လုပ်ဖြစ်နေတာတွေ.. တင်ဦးမလားပဲ.. ဟဲ… အမြင်တော့ ကတ်နေလောက်ပြီ ထင်တယ်ဗျို့…
ကွန်ပြူတာ.. တက်ဘလက်.. အိုင်ပက်နဲ့..ဆဲလ်ဖုံး..(အိုင်ဖုံး-စက်ရုပ်ဖုံး)တွေမှာ.. ဇော်ဂျီဖေါင့်ထည့်နည်း..သုံးနည်းလေး.. ၁-၂-၃-၄ နဲ့ ယူအက်စ်က.. မြန်မာတွေနားလည်လောက်တဲ့ပုံစံ.. ရေးရင်ကို.. သတင်းစာထဲထည့်သုံးဖို့.. စဉ်းစားထားသဗျ…။
ကေဗျာ.. Root ဖောက် Jail Break ဖြည်.. ဖောင့်ထည့်.. ကေလေ.. လုပ်ကြည့်မယ်.. ရေးတာတော့ ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်..အခု Flow မျိုးပဲ ရေးမှာကိုး…